Radanoara Julien “Ravao any io governemanta io”
Tsy lasa intsony izao ary tsy hiandry ho faty ny vahoaka Malagasy vao hihetsika, hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien.
Ny fiaraha-mitantana ny firenena no vahaolana manoloana izao olana lalim-paka mahazo ny firenena izao, raha ny fanehoan-keviny. Voafidim-bahoaka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, isika koa ao anatin’ny demokrasia ka mijanona eo amin’ny toerany izy hatramin’ny 2018. Manolo-tanana kosa izahay amin’ny fiaraha-mitantana, hoy izy. Ny fiaraha-mitantana eto dia ny governemanta rehetra no ravana ary mihantona ny andrim-panjakana rehetra fa ny filohan’ny repoblika kosa mijanona eo ihany. Hisy kosa ny komity anankiray hitondra ny firenena satria misy hevitra be dia be tsy nohenoin’ny fanjakana hatramin’izay hoentin’io komity io hanarina ny firenena. Anjaran’ny filoham-pirenena no mandray izay tolo-tanana izay na tsia. Raha minia miziriziry moa izy dia ny vahoaka tompom-pompahefana no handray ny andraikiny. Ny fifidianana no atao hoe fifandimbiasam-pahefana. Mandritra ny fiaraha-mitantana no hamolavolana ny fepetra mazava hiatrehana ny fifidianana madio, milamina malalaka ary mangarahara ary eken’ny besinimaro. Hihaino ve ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sa dia rano atobaka an-damosin-gisa hatrany ny fanehoan-kevitra ? Ny zava-misy hatramin’izay mantsy dia manidy trano sy manamafy orina ny sezany no ataon’ny fanjakana HVM. Malaza fa tsy hamotsotra io fahefana io mora foana izy na hiafara amin’ny ra mandriaka aza. Ny tantara no hitsara !